तिर्थराज भट्टराई नेपाल विद्यार्थी सङ्घ ९ नेबिसंघ को राजनीतिबाट उदाएर मोरङ , सुनसरी जिल्लाको नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा एक चिरपरिचित नाम हो । २०६५ मा विराटनगर स्थित जनता नमुना उच्च माध्यमिक बिद्यालयको नेबिसंघको इकाई सभापति भएका थिए । भट्टराई २०६९ मा विराटनगर मै रहेको महेन्द्र मोरङ क्यापसको इकाई सचिव , उप सभापति हुँदै केही समय कार्यवाहक सभापति समेत बने।
स्थायी बसोबास सुनसरी स्थित महेन्द्रनगर भए पनि अध्ययन पूरा गर्ने विराटनगर पुगेका भट्टराई पुन महेन्द्रनगर फर्के पछि सुनसरीमा नेबिसंघ मार्फत काँग्रेसको राजनीति गर्न सुरु गरेका थिए। सुनसरी फर्के पछि २०७१ मा तत्कालीन क्षेत्र नं ६ को नेबिसंघ सभापति र जिल्ला सह सचिवको जिम्मेवारी पाए । नेपाली काँग्रेसको २०७२ सालमा सम्पन्न १३ औँ महाधिवेशनबाट भट्टराई २५ वर्षकै उमेरमा तत्कालीन महेन्द्रनगर गाऊ एकाइ कार्य समितिको कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए ।
सामाजिक , राजनैतिक चेतनाको रूपमा कमजोर एव आर्थिक रूपले मध्यम परिवारमा जन्मेका भट्टराई हाल नेपाली काँग्रेस समायोजन पश्चात वराहक्षेत्र नगर कार्य समितिको कोषाध्यक्ष रहेका छन । उनी क्षेत्र नम्वर ४ को नेविसंघको सभापति पनि हुन ।
आसन्न १४ औँ महाविदेशको चल पहल वराहक्षेत्रमा रहेका काँग्रेस नेता तथा कार्यक्रताहरुमा लागिरहेको अवस्थामा वराहक्षेत्रमा नेता भट्टराईसँग सञ्चारपाटीका लागि संगम विष्टले गरेको कुराकानी :
- आज भोलि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले कोभिड ९१९ का कारण राजनीति माहौल सेलाएको छ । तर पनि पार्टीलाई चलायमान बनाऊ कार्यक्रम तथा विभिन्न गतिविधिमा संलग्न हुने , अग्रज नेताहरूसँग सल्लाह लिने, समकालीन साथीहरूसँग अनुभव आदानप्रदान र विद्यार्थी नेताहरूलाई मार्ग निर्देश गर्ने काममा व्यस्त छु ।
-वराह क्षेत्रमा नेविसंघको अवस्था कस्तो छ ?
वराह क्षेत्रमा एउटा बहुमुखी क्यापस र २ वटा प्लस टूमा नेबिसंघ गठन भएको छ । म क्षेत्र नं ४ को सभापति भएकाले मेरो क्षेत्रमा रहेका क्यापस र प्लस टूमा नेबिसंघ गठन गर्ने योजना सहित काम गरिरहेको छु । चक्रघटि स्थिति सप्तकोसी बहुमुखी क्यापसको इकाई समितिले विभिन्न कार्यक्रम गरेर नेबिसंघलाइ चलायमान र सङ्गठनको काम गरिरहेको छ । हालको कोभिड १९ को समयमै इकाई समितिले बिद्यार्थीकालागि खाद्यन जोह , डेरा भाडा छुट देखि फुड बैङ्क सञ्चालन गरेऊ अहिले पनि महिला , असक्त कालागि घरमै खाद्यन लगिँदैन कार्य जारी । विद्यार्थीको हक, हित र अधिकार कालागि गठित स्थापना भएको नेपाली काँग्रेस काँग्रेसको भातृ संस्था नेबिसंघ अहिले नगर समन्वय समिति गठन गर्ने तयारीमा छु ।
- वराह क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
सिधा रूपमा भन्दा वराह क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेस अहिले अस्पतालको छ । वराह क्षेत्रमा काँग्रेसको नेतृत्व कमजोर छ। ०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीलाई नगरवासीले प्रतिपक्षमा उभिएर सत्तापक्षले गरेको बेथिति , विसङ्गति र भष्ट्रचारको भण्डाफोर गर्न जिम्मेवारी दिए पनि हामी चुकी रहेका छौ । हाम्रै अगाडि कयौँ बेतिथि भए पनि हामी चुप लागेर मौन समर्थन जनाइ रहेका छौ । नगरवासीको भावना काँग्रेसको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले बुझ्न सक्नु भएको छैन । हाम्रो नगरको नेतित्बको ढाँचाले पनि पूर्णता पाएको छैन। आगम महाविदेशबाट सबल, सक्षम नेतृत्वले अस्पतालमा रहेको काँग्रेसको स्वास्थ्यलाई निरोगी बनाएर जनताको पार्टी बनाउने विश्वास लिएको छु ।
- वराह क्षेत्रमा काँग्रेसलाई कमजोर छ भन्नु भयो यसको मुख्य जिम्मेवारी कसले लिने ?
पक्कै पनि गुण र दोषको जिम्मेवारी नेतृत्व तहमा बसेको नेताहरूले नै लिनु पर्छ । कार्यकर्ताको भावना अनुसार काम नगर्दा नेतृत्व असफल भएको हो । तर हामी कार्यकर्ता , काँग्रेसमा आस्था राख्ने मानिसको संङख्या भने उत्साहजनक छ । मात्र नेतृत्व गर्ने नेताहरूको कमजोरीले मात्र हामी पछि परेका छौ । यसलाई बुझेर नेतृत्व अगाडी बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
-तपाई पनि नगर कोषाध्यक्ष हुनु हुन्छ तपाई पनि नेतृत्व तहकै नेता हैन र ?
अवस्था पनि हो । म तत्कालीन महेन्द्रनगर कोषाध्यक्ष थिए। पछि समायोजन पश्चात् नगरको कोषाध्यक्ष भए । तर अहिले नगर कार्यसमितिमा १ सभापति , ४ सह९ सभापति , ७ सचिव, ५ कोषाध्यक्ष , रहेका छन् । यसले गर्दा हामी बिच नै को ठुलो भनेर विवाद नै छ । सानो गाविसमा राजनीति गरेका नेताहरू एकै पल्ट नगरको नेतृत्व समाल्न गार्‍हो हुँदो रहेछ । नगरपालिकामा हाम्रो अवस्था कमजोर हुनुमा नेतृत्व तहमा रहेका साबिक गाविसका सभापतिहरू तथा त्यो भन्दा माथिल्लो क्षेत्र, जिल्ला तहका नेताहरूले संयोजनकारी भूमिका नखेल्दा हाम्रो प्रस्तुति नगरमा कमजोर भएको हो । मेरो पनि केही कमजोरी होलान् म यसको गुण र दोष लिन तयार छु ।
-कस्तो खालको नेतृत्वले वराह क्षेत्रमा काँग्रेसको जित होला ?
कार्यकर्ताको भावना अनुकूल काम गर्ने । विधि विधान अनुसार पार्टीको गतिविधि गर्ने । युवा जोस र इमानदारीपूर्वक काम गर्ने नेतृत्वले मात्र काँग्रेसलाई वराह क्षेत्रमा सही रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ । समावेशी तथा समानुपातिक रूपमा सबै जाति, समुदाय , भाषा, धर्म , लिङ्ग, भूगोल तथा सम्प्रदाय भावना बुझी नैतिकवान नेतित्बले मात्र काँग्रेसको जित सुनिश्चित गराउन सक्छ ।
-वराह क्षेत्रमा यस्तो खालका मान्छे काँग्रेसमा छन् त ?
काँग्रेस भित्र इमानदार , नैतिक , चरित्रवान् र केही गर्छु भन्ने खालका मानिसहरूको संङख्या धेरै नै छ । मात्र उनीहरू मौकाको खोजीमा छन् । केही गर्छु भनेर लागि परेका छन् । राजनीतिलाई समाजसेवा हो भनेर मानेर काङ्ग्रेसबाट राजनिती गर्ने मानिसहरूको संङख्या उल्लेखनीय नै छ । अब कार्यक्रताहरुले छान्ने बेला आउदैछ ।
- यस्ता खालको मान्छे काँग्रेसको नेतृत्वमा आउला त ?
आगम १४ औँ महादिवेशवाट अवश्य आउने छन् । प्रयोग भएर काम नगरी गफै मात्र गरेर बस्ने नेताहरूलाई अब कार्यकर्ताले टुङ्गो लगाउने छन् । अबको नेतृत्वमा काँग्रेसका कार्यक्रताहरुले सही नेतृत्व चुनेर अस्पतालमा गएको काँग्रेसलाई घर फर्काउने छन् ।त्यस पछि काँग्रेसले वराह क्षेत्रमा चुनाव चिन्न गार्‍हो हुँदैन ।
-वराहक्षेत्र नगरपालिका कम्युनिष्टले जित्दै आएका छन्, काँग्रेसले वराह क्षेत्रमा चुनाव जित्ला र ?
काँग्रेसले चुनाव जित्नै नसक्ने भन्ने हुँदै होइन । काँग्रेसले चुनाव हार्ने एउटै कारण भनेको आन्तरिक असहमति हो । हामी अब एक ढिक्का भएर जाँदैछौ, गइरहेका छौ । पाटी भित्रको एकता बलियो भएको छ । यही हो हाम्रो चुनाव जित्ने आधार । कम्युनिष्ट पाटीले अहिलेसम्म वराहक्षेत्र नेतृत्व गरे । वराहक्षेत्रबासीलाई सुखी , खुसी र समृद्ध बनाउन सकेनन् । अब काँग्रेसको नेतृत्वमा मात्र वराहक्षेत्रले विकासमा फड्को मार्छ । कम्युनिस्टको ३ वर्षको कार्यले पुरै नगरपालिका दुर्गन्धित भई सकेको छ । भ्रष्ट्राचार , बेतिथिले सीमा नाघी सकेको छ । बराहक्षेत्रमा हालको स्थानीय सरकारको नेतृत्व देखि वाक्क भई सकेकाले हामी एक ढिक्का हुने साथ चुनाव चिन्नेमा कुनै दुबिधा नहोला ।
-बडो ढुक्क सँग हामी एक ढिक्का हुने साथ चुनाव जित्छौ भन्नु भयो । वराह क्षेत्रमा काँग्रेसका नेताहरू एक हुन सक्छन् र?
नेताहरू एक हुनुको विकल्प छैन । केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्म रहेका काँग्रेसका नेताहरू एक भएनन् भन्ने काँग्रेसको जित कसरी हुन्छ । हामी९हामी बिच बेमेल हुँदा कस्तो नतिजा आउँदो रछ भनेर गएको तिनै तहको निर्वाचनको नतिजाले प्रमाणित गरी सकेको छ ।गएको निर्वाचनलाई अब पाठको रूपमा लिएर वराहक्षेत्रका १ देखि ११ वटा वडाका नेताहरू तथा क्षेत्र , जिल्लाका नेताहरू एक ढिक्का हुनै पर्छ । अब युवा सोझ र सबल नेतृत्वले यसको नेतृत्व र आव्हान गर्नेछ।
-काँग्रेस भित्र अहिले युवालाई नेतृत्व दिनु पर्छ भनेर बहस चलिरहेको छ । यसलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ ?
जसरी केन्द्रमा युवा पुस्ताको खोजी गर्दैछ । त्यसरी वराह क्षेत्रमा पनि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा युवा पुस्ताको खोजी कार्यकर्ताले गरिरहेका छन् । पुरानो सोच र परम्परागत शैलीले पाटी चल्न नसक्ने भएकाले अब वराह क्षेत्रमा पनि नेतृत्वमा युवा पुस्ता आवश्यक छ । त्यस कारण पनि अबको नेतृत्वमा युवा नै हाबी हुने प्रस्ट छ ।
-आगम १४ औँ महादिवेन पश्चात् नेपालि काँग्रेस वराह क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ला ?
कोभिडको त्रास नभएको भए त अहिले हामीले अधिवेशन लागि सकेको उम्तियो । तर महामारीका कारण अधिवेशनको मिति पर सल्ला जस्तो छ । अहिले निधाएको जस्तो अवस्थामा रहेको काँग्रेस वराह क्षेत्रमा अधिवेशन पश्चात् नव- जीवन पाएको जस्तै सशक्त भएर नयाँ नेतृत्वको साथ आउने छ । जुन नेतृत्वले आम कार्यकर्ताको भावना अनुसार रचनात्मक प्रतिपक्षमा रूपमा अनिमिताको भण्डाफोरसँगै विकासमा कामलाई सहयोग गरेर जानेछ।
- अब तपाईँको भावी योजना के छ रु के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
म पाटीको १३ औँ महाधिवेशनमा तत्कालीन महेन्द्रनगर गाविसको कोषाध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भए । हाल नगरको कोषाध्यक्ष तथा नेविसंघको क्षेत्रीय सभापति , जिल्ला सह९ सचिव छु । अब मेरो १४ औँ महाधिवेशनबाट भावी योजना पाटीको क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा नगरको सचिव भएर सङ्गठनको काम गर्ने इच्छा छ । यसतर्फ केन्द्रित भएको छु अहिले ।
नेपाल चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश १ ले नेपाली .....
यौनका कुरा : महिलाले कसरी चरम सुख कसरी प्राप .....
इटहरीका हिराको आफ्नै घरको छटबाट लडेर मृत्यु .....
तरहरा जेसीजको सप्ताह सुरु .....
कोरोना प्रमाणित गरेको शुल्क असुल्दै इटहरी उपम .....
धरानबाट ब्राउनसुगर किन्न पुगेका चार जना पक्रा .....
इटहरीका होटलहरु साढे ९ बजेसम्म खोल्न पाइने .....
राज्य बिहिन भएको अनुभूति भयो .....